Cuntada aan-karbohaydareedka: liiska
Haddii aad si dhab ah u go'aansato inaad bedesho tiradaada, waad isku dayi kartaa borotiinka, ama cunto aan kaarbohaydareed lahayn. Waxaa haboon in la ogaado in tani ay tahay mid aan caadi aheyn nafaqada dadka, iyo borotiinka xad-dhaafka ah si xoog leh u buufisiyaa jirka, sidaas darteed lagama maarmaan in la cuno si joogto ah. Ka hor intaadan isticmaalin nidaamka, la tasho khabiir. Cuntada ayaa si adag uga horjeeda kuwa qaba dhibaatooyinka kelyaha.
Waa maxay saldhigga menu ee cunto karbohidrat ah?
Saldhigga cuntadani waa mabda'a ah in la yareeyo isticmaalka cuntada karbohidratka - waa qarsoodi in ay tahay mid ka dhigaysa muuqaalka muuqaalka kaydka dufanka jirka. Cuntadani waa mid caan ah, sababtoo ah inkastoo xaqiiqda ah in aadan dareemeynin gaajo, miisaanka ayaa si dhakhso ah u tagi doona.
Cuntadani waxay ku haboon tahay oo keliya kuwa ku caanbaxsan faahfaahin iyo ujeedo, maaddaama ay lagama maarmaan tahay in la tiriyo tirada borotiinka, dufanka iyo carbohydrateska la wada baabbi'iyo, iyo in la xasuusiyo xusuusqorka nafaqada. Goobta isboortiga, cunto karbohidratka ah oo leh cuntadeeda adag waxaa lagu magacaabaa "qalajinta", maaddaama ay tahay nooca cuntada ee caawineysa in la yareeyo dufanka jidhka, lana jimicsado jimicsiga wuxuu ka caawiyaa in laga saaro lakabka lafaha iyo ka dhigo murqaha quruxda badan ee muuqda.
Maalin ayaa loo oggol yahay inay cunto ilaa 40 garaam oo kaarbohaydareed, inta kale ee cuntadu waa inay noqdaan borotiino. Carbohydratesku waa tamarta ugu muhiimsan ee tamarta, iyo marka aan la heli karin, jidhku wuxuu bilaabmaa isticmaalka kaydadka dufanka.
Aad bay muhiim ugu tahay cuntadan sida ugu yaraan 2 litir oo biyo ah maalintii. Haddii kale, waxay aad ugu adkaan doontaa in jirka uu dib u dhiso hab cusub. Qaado cunto goos-goos ah, qaybo yaryar oo maalintii oo dhan ah, cunnadii ugu dambaysay ee la qabtana wakhtiga ugu dambeyn 3-4 saac ka hor wakhtiga jiifka.
Cuntada aan-karbohaydhka ah ee miisaanka lumay - cuntada
Cuntada noocaan oo kale ah, waxaad ku dari kartaa nooc kasta oo borotiinka ah, laakin inta kale ee alaabadu waxay noqon doontaa mid adag. Sidaa darteed, in aad isticmaali karto in tiro kasta:
hilibka caanaha - hilibka lo'da, dufanka, ciyaarta;
kalluunka dufanka yar;
waxyaabaha caanaha dufanku hooseeyo;
ukunta digaaga iyo digaagduur;
jiis iyo jiis yar oo dufan ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo liiska badeecadaha, soo dhaweynta kaas oo si adag loo mamnuucay:
wax kasta oo bur ah - rooti, ​​baasto, bur saliid, bakeeri, digirta, iwm.
dhammaan macaan - sonkorta, malab, macaanka, shukulaatada, cufan cufan iyo macaan macaan, iwm.
cabitaan khamri ah;
cabitaan macaan - soodhada, casiirka, iwm.
Waxyaabaha aan ku jirin liiska mamnuucidda, waxay si tartiib tartiib ah u kabi karaan cuntada ugu muhiimsan borotiinka.
Cuntada aan-karbohaydareedka ahayn - cuntada maalinba
Si aad u isticmaasho liiska qiyaasta cunto karbohidratka ayaa ugu fiican ka dib markii la-talin horudhac ah oo lala yeesho takhtar, maaddaama cudurrada qaarkood sida cuntooyinka ay ka hortagaan (gaar ahaan cudurrada kalyaha).
Quraac: Koobka qaxwada oo aan sonkor lahayn, badh badhida, ukunta.
Quraac labaad: gogol oo ah farmaajo ama jiis yar oo qoyan, shaaha.
Qadada: salad cagaaran iyo digaag caano ah, casiir.
Cunto: kala badh xayawaan.
Casho: kalluun fiiqan leh qajaarka.
Cashada kadib: hal galaas oo kefir ah.
Quraac: laba ukumo, baddal, shaaha.
Quraac labaad: oranji.
Qadada: hilibka lo'da leh ee loo yaqaan 'zucchini' iyo yaanyo.
Cunto qaadashada subaxda: liinta, shaaha.
Casho: naaska dufanka leh kaabajka.
Cashada ka dib: hal galaas oo ryazhenka ah.
Quraac: jiis, dufan yar oo dufan ah.
Quraac labaad: 2-3 tangerines.
Qadada: Salad qudaarta ah, gabal oo hilib ah (dufan, lo ').
Cunto: Caano fadhi.
Casho: kalluunka la dubay khudaarta.
Cashada kadib: caano fadhi la'aanta.
Xilliga ugu badan ee aad adigu u hoggaansami karto cuntadan waa 7-10 maalmood. Taas ka dib, waxaa habboon in la beddelo nafaqo habboon iyo sii wadida tababarka. Laabashada waxaa lagu soo celin karaa bisha soo socota.
Raalli gelin, cunto!
Cunto dufanka miisaanka oo lumay miisaanka
Cunto Malysheva muddo 10 cisho ah
Cufanka Cuntada - Cuntada toddobaadka
Maalinta la qaboojinta ee bataatiga iyo macdanta - sida loo isticmaalo si wax ku ool ah?
Cabbage diet ee miisaanka luminta 5 maalmood
Cunto Jajab ah
Cuntada qajaarka miisaanka luminta 10 kg
Cunto loogu talagalay gout - liiska qiyaasta
Cuntada Sanadka Cusub - Cunnada cuntada ee miiska sanadka cusub
Cunto ka timaada finanka wajiga
Cuntada Detox ilaa 7 maalmood
Calaamadaha ifilada doofaarka ee caruurta
Jikada huruudda ah
Nina Dobrev ayaa xaqiijisay in haweeneyda Glen Powell ay ka warqabtay
Biyaha cadmeed ee loogu talagalay carruurta
Dharbaaxo si aad uga baxdo
Sidee Emilie Clarke ugu riyaaqday fasaxa kirismaska?
Muraayadaha fur furan dabiiciga ah
Dhibaatada 5 sano jirka ah ee carruurta - talada dhakhtar cilmi nafsi
Waxyaabaha loogu talagalay qanjidhka thyroid ee ku jira iodine
Bixinta caruurta da'doodu tahay 10 sano
Maklura - codsi
Cagaarshowga B Hepatitis B
Bacriminta Maasriga ah ee geedo - cuntooyinka ugu waxtar badan
Sababtoo ah xatooyo, Taylor Swift ayaa halis ugu jirta $ 42 milyan
Wanka khamriga - qajaarka
Sidee loo kariyaa kalluunka qashinka leh qashinka?
Bulgur - nooc noocee ah, sidee loo kariyaa suxuunta asalka ah iyo delicious ka soo?
Cunto miisaaman oo miisaanka lumay